रंगमञ्चबाट उदाएको अभिनेता सुवास – ABC KHABAR
रंगमञ्चबाट उदाएको अभिनेता सुवास
March 5, 2016 March 7, 2016 ABC Khabar कला
काठमाडौं, २१ फागुन । रंगमञ्चको दुनियाँबाट चलचित्रको अभिनय यात्रामा छिरेका लमजुंग भारते–७ का सुवास गुरुङ गुरुङभाषाको चलचित्रका अब्बल निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता हुन् । गुरुङको कर्मथलो हङकङ भए पनि नेपाली कला र संस्कृतिको भनौँ अझबढी आफ्नो समुदायको संस्कृतिप्रतिको मोहले उनलाई स्वदेशमा सँधै तानि नै रहेको छ ।
काठमाडौंको त्रि–चन्द्र कलेजमा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा कलायात्रामा लागेका गुरुङ तत्कालीन तमु विद्यार्थी संघको नाच्ने गाउने कलाकारको रूपमा कलायात्रा तय गरेका बताउँछन् । नाच्दै गाउँदै हिडेका अल्लारे उमेरबाट नै आफ्नो भविष्यको फरक बाटो रोजेका थिए । करिब बीसवर्षको अन्तरालमा उनको यात्रा चलचित्रको कुसल आदीवासी नायक तथा अभिनेता हुँदै निर्माता निर्देशक सम्म आइपुगेका छन् ।
सुरुमा सानोतिनो अभिनयमा लागेको उनले राष्ट्रिय नाचघरमा १८ महिने अभिनयको तालिम लिएपछि अभिनयमा जम्न थालेका हुन् ।रंगमञ्चमा पहिलोपटक ऐतिहासिक नाटक ‘रणदुल्लभ’ बाट अभिनय गरेका उनले ०५५÷५६ सालमा सन्तोष पन्तद्वारा निर्दे्शित ‘हिजो आजको कुरा’ टेलिसिरियलमा अभिनय गरेको विगत सुनाए । उनले अर्को टेलिचलचित्र ‘करुणा’मा समेत अभिनय गरेका छन् । यस्तै उनी अभिनित नाटक ‘शान्ति दीप’ दोस्रो रहेको थियो । यसैगरी भर्खरै प्रदर्शनमा आउको चलचित्र ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’को अघिल्लो रंगमञ्चीय प्रदर्शनमा समेत उनको अभिनय रहेको थियो ।
उनले आफ्नो अभिनयलाई निरन्तरता दिने क्रममा आदीवासी चलचित्रतर्फ लगाव बढेको भन्दै यतातिर लाग्न कलाकार नविन सुब्बाको निकै ठूलो प्रेरणा रहेको बताए । ‘नेपालमा बस्ने यतिका धेरै आदीवासी समुदाय रहेका छन् । उनीहरूको कथा, व्यथा, संस्कार संस्कृतिको बारेमा किन खोजी नगर्ने भन्ने मनमा लाग्यो यसबारेका नविन सुब्बाले मलाई राम्रै प्रभाव दिए ।’ विशेष गरेर अहिले गुरुङभाषाको चलचित्र निर्माण गर्दै आएका उनले आदीवासी संस्कृतिको संरक्षण भनेको विश्वका लागि वितरण गर्न सकिने नौलो परिकारका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो गुरुङ, मगर, लिम्बू, राईहरूले हालसम्म विकास गरेको संस्कृति विश्वको कुनाकुनामा पाइन्छ ? पाइन्छ भने हाम्रो थातथलोमा पाइन्छ नत्र त्यो विश्वबाट लोप भइसक्यो ।’ यसो भन्दै गर्दा उनले आफ्नो ५ वटा गुरुङभाषाको चलचित्र रहेको समेत जानकारी दिए । हालसम्म १० वटा फिल्म निर्माण गरिसकेका उनले भने ‘अरू ५ वटा फिल्म मिश्रित भाषामा रहेको छ ।’
पहिलोपटक गुरुङ भाषामा रहेको चलचित्र ‘म्हेथेवा’ निर्माण गरेर चलचित्र क्षेत्रमा हामफालेका उनले यसपछि क्रमशः फिल्म क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । कुशल अभिनय क्षमताका धनी गुरुङले निर्माण गर्ने फिल्म सबै संस्कृतिसँग जोडिने गरेको जानकारी दिएका छन् । पहिलेको तुलनमा भाषिक सिनेमाहरूमा आमदर्शकको क्रेज बढेको भन्दै उनले यसमा समाजको चेतना स्तरमा वृद्विहुँदै आएको पनि बताए । उनले भने, ‘हिजोजस्तो हातको चोर औँला र हत्केला मात्र देखाएर अब नेपाली सिनेमा चल्दैनन् । दर्शकहरूको रुचि तथा अध्ययनको क्षेत्र बृहत् भएकाले आफ्नो परिवेश खोज्न सक्ने जमातको विकास भइसकेको छ ।’ कतिपय सिनेमाहरू सुपरफ्लपसमेत भइरहेका भन्दै उनले आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक वेसमा बनेका कुनै पनि चलचित्र घाटामा नगएको उनको अनुभव रहेको सुनाए ।
मूलधारका भनिने चलचित्रहरूले समयलाई समाउन नसकेको बताउँदै हामीले हामी नै भएर सोचेनौँ भने प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने निश्चित रहेको समेत उनको भनाइ रहेको छ ।
कलायात्राको अलवा रोजगारीको सिलसिलामा हङकङमा रहेका उनले आफ्नो माटोलाई छाडेर जब अर्को देशमा पुगिन्छ त्यहाँ आफ्नो माटोको माया प्रवल भएर आउने बताएका छन् । ‘त्यहाँ पुगेपछि थाहा हुँदो रहेछ आफ्नो पन के हो ? भन्ने विषय । जसले अध्ययन गर्न तथा त्यसतर्फ लाग्न निरन्तर प्रेरित गर्दोरहेछ ।’ उनले भने ।
उनले पुर्खाहरूले गरेको सबै काम तथा कर्महरू लामो समयको अभ्यासबाट भएकाले सिक्नु धेरै रहेको तर विस्तारै पुरानो पुस्ता सकिँदै जान लागेकाले अझ चाँडो गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘बाजेले गरेको कुरा बुवाले सुन्नुभयो होला कम अनुसरण गर्नुभयो होला तर हामीले सुँघ्न मात्र पाएका छौँ । के गर्ने होला । त्यसैले खोजीगर्न तथा भावी पुस्तालाई समेत हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा लागेको छु ।’ भाषामा आधारित चलचित्र निर्माणमा विशेष योगदान दिएका उनले हङकङको व्यस्त जीवनमा आपूmले समयको व्यवस्थापन गरेर निरन्तरता दिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अरूले जाँड खाएर बिताउने समयमा मैले कलायात्रामा लगानी गर्ने गरेको छु ।’
बुहप्रतिभाको धनी गुरुङले मातृभाषाको संरक्षण र संवद्र्वनका लागि मरिहत्ते गर्दै आएको भए पनि राज्यको नजर त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनले आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि पहिचानको पेचिलो लडाइँ चलिरहेको बेला थोरै भए पनि आफ्नो समुदायलगायत सिंगो समाजका लागि योगदान दिने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा हामफालेको बताएका छन् ।
आदिवासी प्रतिभा सुबास गुरुङले भर्खरै पोखरामा सम्पन्न फस्ट गुरुङ फिल्म फेयरमा ४ वटा छुट्टाछुट्टै बिधामा अवार्ड समेत जितेका छन् । उनको पहिलो गुरुङ भाषाको चलचित्र ‘म्हेथेवा’ले वेस्ट जुरी फिल्म अवार्ड तथा वेस्ट एक्टर जुरी अवार्ड जितेको हो । जुन चलचित्रमा निर्माता तथा अभिनेताको भूमिकामा समेत उनी आपैmँ रहेका छन् ।
उनको अर्को चलचित्र ‘ङ्इजिन्दगी’ले वेस्ट प्लेब्याक म्युजिक अवार्ड पाएको छ । यस्तै उनको चलचित्र ‘आस्यो’ले भने स्पेसल फिल्म जुरी अवार्ड जितेको हो । अर्को चलचित्र निर्माणमा जुटिरहेका गुरुङले आउने चलचित्र ‘कुटुम्बेरी साइनो’ निर्माणको तयारीमा रहेका जनाए ।
फोटो साभार : फेसबुक वालबाट
कविता– समय सँगै जिन्दगी सुल्टो घुम्लाकी !
सेल्टा डि भिगोमाथि रियल मड्रिडको शानदार जित